कोरोनाले कोरियामा २५ लाखको रोजगारी गुम्यो, नेपाली कामदार कत्तिको प्रभावित ? – सडक मिडिया
कोरोनाले कोरियामा २५ लाखको रोजगारी गुम्यो, नेपाली कामदार कत्तिको प्रभावित ?
माहामारीकाे रुपमा फैलिएकाे कोरोना भाइरसका कारण बिश्वभरकाे श्रम बजार नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ । जसले गर्दा धेरै रोजगार यतिबेला बेरोजगार बन्नु परेको छ ।
यस्तै नेपालीहरूको लागि रोजगारीकाे आर्कषक गन्तव्य मानिदै आएको दक्षिण कोरियाको कोरोना माहामारीपश्चात झण्डै २५ लाखले आफ्नो रोजगारी गुमाउनु परेको छ । कोरोनाको महामारीले रोजगारी आकर्षण मानीएको कोरियामा धेरैले निरास हुनु परेको छ ।
कोरियामा अगष्ट महिनामा मात्रै २ लाख ७४ हजार रोजगारी गुमेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार यहाँको बेरोजगारी दर गत अगष्टमा ०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएर हाल ३.१ प्रतिशत पुगेको छ । यो सँगै वित्तीय सङ्कट उत्पन्न भई गत अगष्टमा रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या पछिल्लो आठ महिनायताकै उच्च हो ।
ठुलो सपना बोकेर कोरिया पुगेका धेरै नेपालीहरु पनि यसको प्रत्यक्ष मा’रमा परेका छन् । कोरोना फैलिएपछि धेरै नेपालीले कम्पनीमा काम घट्न थालेसंगै अतिरिक्त काम गर्न पाएका छैनन् । कैयौ कम्पनिहरु एक सिफ्टमा मात्रै संचालन हुने गरेपछि अतिरिक्त काम गर्नबाट बन्चित भएको धेरै नेपालीले बताएका छन् । कतिपय कम्पनीले बेतलबी बिदा बस्न वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने, हप्तामा तीन वा चार दिन मात्र काममा बोलाउनेलगायतका कारण नियमित पाइरहेको आम्दानीमा गिरावट आउने तथा समयमा तलब पाउनसमेत मुस्किल भएको यहाँ श्रम गरिरहेका नेपालीहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि एनआरएन कोरियाका अध्यक्ष यज्ञराज सुवेदीले यो महामारीमा कोरियामा आम्दानी तथा काम घटे पनि विदेशी कामदारहरू विशेषगरी नेपालीहरू अझै सुरक्षित रहेको बताउँछन् । उनले कम्पनी बन्द भई बोरोजगार भएँ भन्ने एकाधबाहेक सुन्नु नपरेको र थोरै भए पनि आम्दानी भइरहनु सुखद कुरा भएको बताए ।
कति जनाले पढें ? 339
Previous Post: डोटी जिप दुर्घ’टनाका घा’ईतेको परिचय खुल्यो
Next Post: जिन्दगी दिन काट्नको लागि होईन, कुनै महान काम गर्नको लागि हो…